Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Viking Cruises: inona no vaovao?
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Cruising • Fandefasana gazety
Viking androany dia nanambara ny sambon'ny ranomasina vaovao, Viking Saturn®, hanatevin-daharana ireo andian-tsambo mpandresy tamin'ny fiandohan'ny taona 2023.
Viking androany dia nanambara ny sambon-dranomasiny vaovao, Viking Saturn®, hanatevin-daharana ireo andian-tsambo mpandresy nahazo loka tamin'ny fiandohan'ny taona 2023. Ny sambo rahavavy misy mpitsidika 930 dia handany ny fotoam-pivavahany mandritra ny diany fitetezana lalana telo vaovao any amin'ny firenena Skandinavia sy Nordic, ao anatin'izany ny dia roa 15 andro, Iconic Islandy, Greenland & Canada, ary Islandy sy mpikaroka arctic any norvezy, ary ny 29 andro Greenland, Islandy, Norvezy & Beyond diany. Ho fanampin'ireo làlana vaovao telo dia nanambara ihany koa i Viking androany fa hampody ilay orinasa 8 andro malaza ity orinasa ity Ny hatsaran-tarehy voajanahary any Islandy fandaharam-potoana manomboka amin'ny Aogositra 2023.
“Ny vahiny an'arivony izay nandeha sambo Tongasoa indray Ny fitsangatsanganana tany Islandy tamin'ny fahavaratra lasa teo dia nankafy ny traikefa nahafahan'izy ireo nanome naoty naoty avo lenta ”, hoy i Torstein Hagen, filohan'ny Viking. “Ireto zotra vaovao ireto dia mety ho an'ny mpandeha te hahafanta-javatra sy lalan'ny zotram-pizahan'ireo mpitsangatsangana Viking hatrany Islandy sy ireo toerana hafa any Atlantika Avaratra fantatra amin'ny hatsaran-tarehin'izy ireo. Manantena ny fandraisana azy ireo izahay Viking Saturnus amin'ireo sambo fiaramanidina misy antsika sy ny fanomezana ny vahiny bebe kokoa ny fomba hijerena ity faritra tsy manam-paharoa an'izao tontolo izao ity amin'ny fampiononana. ”
Fitsangatsanganana Nordic vaovao sy miverina 2023:
Iconic Islandy, Greenland & Canada (VAOVAO) - Ity dia lavitra mandritra ny 15 andro ity dia manerana an'i Islandy, Greenland ary ny faritany kanadiana any Newfoundland sy Nova Scotia. Mandehandeha eo anelanelan'ny New York City sy Reykjavik, ny vahiny dia hankafy ny tontolon'ny volkano ao amin'ny Nosy Westman, hankafy ny fiainana milamina any Djúpivogur, ary handeha amin'ny arabe amin'ireo tanàna mahafinaritra toa an'i Seydisfjördur sy Akureyri.
Islandy sy mpikaroka arctic any Norvezy (VAOVAO) - Amin'ity dia mandritra ny 15 andro ity, ny vahiny dia hahita fiainana any avaratra indrindra mandritra ny diany mamaky ny Arctic Circle sy ny morontsirak'i Norvezy sy Islandy. Taorian'ny nankafizanao fijanonana tao alina Viking SaturnusSeranan-tsambon'i Bergen ao an-tranonao, araho ny dian'i Vikings rehefa mitsidika ny faritra lavitra any North Cape any Honningvåg ianao ary mijery an'i Longyearbyen, izay misy bera polar betsaka kokoa noho ny olona.
Greenland, Islandy, Norvezy & Beyond (VAOVAO) - Azon'ny vahiny atao koa ny misafidy ny manambatra ireto zotra roa ireto mandritra ny dia maharitra 29 andro. Miala ao an-tanànan'i Bergen, ligin'ny Hanseatic teo aloha, ny vahiny dia hanaraka ny lalan'i Vikings hamakivaky ireo firenena Skandinavia any Norvezy, Islandy ary Greenland alohan'ny handehanany mankany Canada ary hifarana any New York.
Ny hatsaran-tarehy voajanahary any Islandy- Miverina amin'ny 2023, ity dia be zotram-pitaterana maharitra 8 andro avy any Reykjavik ity dia mijery ny morontsirak'i Islandy be voninahitra. Mandeha an-tsambo Viking Star®, hihaona amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary tsy manam-paharoa ny vahiny, hijerena riandrano mirotsaka ary ny velaran-tany madio fjord. Araho ny dian'ilay mpikaroka mpikaroka Leif Eriksson izay tsy mataho-tody, jereo ny bibidia eo an-toerana ary asitrio ny natiora.
Ny sambon-dranomasin'i Viking dia manana taonina marobe 47,800 465 taonina, miaraka amin'ny staterooms 930 izay mahazaka vahiny XNUMX. Anisan'ny andian-dranomasina nahazo loka Viking Viking Star®, Viking Sea®,Viking Sky®,Viking Orion®, Viking Jupiter®ary Viking Venus®. Viking Mars®aryViking Neptune®hiditra amin'ny sambo amin'ny 2022; Viking Saturnus hanatevin-daharana ny fiandohan'ny taona 2023. Nosoratan'i Cruise Critic ho “sambo kely”, ny sambon-dranomasin'i Viking dia manana endrika scandinavianina maoderina miaraka amina fikasihana mahafinaritra, toerana akaiky ary fiheverana amin'ny antsipiriany. Anisan'izany ny:
Veranda Staterooms rehetra: Ny vahiny dia afaka misafidy sokajy stateroom dimy, manomboka amin'ny 270 sq.Ftanda Staterooms, miaraka amin'ny veranda manokana, fahitana tsara ny toerana haleha sy ireo kojakoja fampiasa premium izay misy farafara am-pandriana miaraka amin'ny lamba firakotra lafo vidy, efi-trano matevina mifanitsy amin'ny lamba, efijery fisaka malalaka. LCD TV misy sarimihetsika takiana, Wi-Fi maimaim-poana ary efitrano fandroana loka misy fandroana lehibe, Freyja premium® vokatra fandroana sy gorodona mafana.
Explorer Suites: Ireo sambo dia misy 14 Explorer Suites, izay efitrano misy efitra roa misy eo anelanelan'ny 757 ka hatramin'ny 1,163 toradroa. Miaraka amin'ny fomba fijery mivelatra amin'ny verandas manokana, ary koa ny fampiasa sy tombontsoa indrindra amin'ny sokajy rehetra ao anaty sambo, manolotra ny toerana masina indrindra i Explorer Suites. ho an'ny vahiny.
Safidy roa amin'ny pisinina: Ho fanampin'ny Main Pool miaraka amin'ny tafo azo alaina mamela ny filomanosana amin'ny vanim-potoana rehetra, ny sambo dia manana Infinity Pool izay tohanan'ny vera voalohany, avy eo am-pitoerana, ahafahan'ny vahiny milomano voahodidin'ny toerana alehany.
LivNordic Spa: Mifanaraka amin'ny lova avaratr'i Viking, The Spa on board dia noforonina tamin'ny filôzôfia momba ny fahasalamana holandain'i Scandinavia ao an-tsaina - hatramin'ny fomban-drazana tamin'ny sauna hatramin'ny zato hatramin'ny Snow Grotto izay nidina moramora avy any amin'ny valindrihana tamin'ny alàlan'ny rivotra mangatsiaka ny felam-panala.
Lounge an'ny mpikaroka sy an'i Mamsen: Mizarà cocktail amin'ireo namanao. Mijanona eo amin'ny sakafo maraina norveziana sy boky misy ny tantaran-dranomasina. Ny Explorers 'Lounge sy ny tohan-tsakafo an'i Mamsen dia toerana feno fiheverana hita eo am-pelatanan'ny sambo ary natao hanehoana ny toe-tsaina skandinavianina amin'ny fialan-tsasatra tanteraka ary ho talanjona amin'ny fahitana amin'ny alàlan'ny varavarankely avo roa heny.
Wintergarden: Ireo vahiny mitady fitoniana dia hahita izany ao amin'ny Wintergarden. Ao amin'ity habakabaka kanto ity eo ambanin'ny lohan'ny hazo trisily Scandinavian, ny vahiny dia afaka misitraka ny tolotra dite atoandro.
Safidy fisakafoanana: Ny sambon'i Viking dia manolotra safidy fisakafoanana valo, tsy misy sarany na sarany fanampiny — avy amin'ny fisakafoanana tsara ao amin'ny The Restaurant, izay manolotra sakafo telo feno sy karazana culinary isan-karazany, ary ny World Café, izay ahitana ny saran-dàlana iraisam-pirenena sy ny sakafo isam-paritra ao anatin'izany ny sushi sy bar mangatsiaka avy amin'ny hazan-dranomasina — ho an'ny traikefa fisakafoanana akaiky ao amin'ny The Chef's Table, izay manolotra menio fanandramana marobe miaraka amina mpivady divay, ary ny Manfredi's, izay manasongana pasta vaovao sy ireo tiana italianina vaovao. Ny Pool Grill dia miavaka amin'ny burger gourmet, raha misy dite sy scones atoandro ao amin'ny Wintergarden. Mamsen's dia manolotra saran-dàlana norveziana norveziana, ary serivisy maimaimpoana mandritra ny 24 ora no ahafahan'ny vahiny mankafy lovia sonia maro amin'ny fiononan'ny stateroom ao aminy. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny safidy maro ho an'ny seza ivelany mandritra ny sakafo, ny sambon'ny ranomasina Viking no manome betsaka indrindra al fresco misakafo an-dranomasina. Ankoatr'izay, ny latabatra ao an-dakozia dia misahana manokana amin'ny lovia isam-paritra manomboka amin'ny tsena ka hatramin'ny latabatra.
Fampiroboroboana ny kolontsaina: Ny traikefa Viking avy amin'ny sambo ka hatrany amoron-tsiraka dia natao ho an'ny fidirana sy fampiroboroboana ara-kolontsaina tsy manam-paharoa. Ireo mpahay tantara Viking Resident dia manolotra fanabeazana ara-tantara sy ara-kolontsaina avo lenta manokana amin'ny dia, manome fahitana sarobidy momba ny tantara manankarena amin'ny toerana itodiana. Ireo mpampianatra mpampianatra vahiny izay manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny sahan'izy ireo dia manome fanazavana momba ny kanto, ny maritrano, ny mozika, ny geopolitika, ny tontolo voajanahary ary ny maro hafa. Ny Destination Performances dia maneho ny zava-kanto fampisehoana kolontsaina malaza indrindra ao amin'ny faritra - na opera italiana na fado portiogey. Mpitendry mozika klasika monina - mpitendry piano, mpitendry gitara, mpitendry lokanga ary mpitendry lokanga - dia manao mozika klasika manerana ny sambo. Ary ny kilasy fandrahoan-tsakafo amin'ny latabatra ao an-dakozia, sekoly fiankinanana an-tsambo an'i Viking, dia mifantoka amin'ny nahandro isam-paritra.
Inspiration Nordic: Na ny antsipiriany kely indrindra aza dia nalaina avy tamin'ny fanahin'ny mpikaroka tany Vikings tany am-boalohany, hita taratra ny fomba nentim-paharazana Nordic. Ny voamadinika hazo maivana, ny fikasihan-kazo sy ny hazondamosina, ny vatosokay Suède ary ny juniper manitra dia hita manerana ny toerana malalaka sy Spa. Ny volavola Viking Bar izay namboarin'i Clinker dia mitovy amin'ny fomba fanamboarana ny Viking Longships tany am-boalohany. Ny Viking Heritage Center dia manome tantara sy zava-misy avy amin'ny vanim-potoana Viking. Ary ny tarehin-tsoratra avy amin'ny Norse Mythology dia ampidirina amin'ny endrika marevaka, manome ny vahiny liana amin'ny aingam-panahy handinika bebe kokoa ny lova avaratr'i Viking.